एक बर्ष अघि मात्र बिवाह भएकी सृष्टिको सडक दुर्घटनामा परि निधन, खबर पछि श्रीमान आजनै विदेशबाट नेपाल फर्किदै ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/एक बर्ष अघि मात्र बिवाह भएकी सृष्टिको सडक दुर्घटनामा परि निधन, खबर पछि श्रीमान आजनै विदेशबाट नेपाल फर्किदै !
काठमाडौ। सोमवारका समाचार माध्यमहरुमा दिनहुँ हुने दुर्घटनाका समाचार जस्तो एउटा समाचार आयो । काठमाडौंको सुकेधारामा बस कुरीरहेकी एक युवतीलाई बसले ठक्कर दियो । घाईते अवस्थाकी उनलाई ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । दिनहुँ निस्कने पत्रपत्रिका हुन् वा छिनछिनमा अपडेट हुने अनलाईन तथा टेलिभिजन समाचार । एउटा न एउटा दुर्घटनाको खबर भएकै हुन्छ । दुर्घटनाको खबर नभएको सायदै कुनै दिन हुन्छ होला । समाचार बनाउने, पढ्नेहरुका लागि त्यो नियमित काम जस्तै भइसक्यो । दिनदिनै सुनिने त्यस्ता समाचारले हाम्रो मन यस्तो कठोर बनाइसक्यो की त्यसको वास्ता पनि हुन छोड्यो । तर जसको परिवारमा त्यो एक दिनको घटना भएको हुन्छ त्यो एक घटनाले कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ होला भनेर हामी सायदै कसैले अनुमान गरेका हुन्छौं होला ।
बिहान पौने छ बजे झिसमिसे उज्यालो थियो । सडकमा गाडी पातला थिए । सुकेधारा चोकमा उनले गाडी कुरेर बसेकी थिइन् । उनलाई भक्तपुर–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने बा४ख ५९२० नम्बरको बसले बिहान करिब ५ः३० बजे ठ क्कर दिएको थियो । जानकारी अनुसार यात्रु चढाउने प्रतिस्पर्धामा बत्तिएका चालकले सावधानी नअपनाउँदा बसले ट्रयाक छाड्यो । क्याम्पस आउनका लागि बस कुर्दै गरेकी पन्तलाई ठ क्कर दियो । उनी गम्भीर घा इते भइन् ।
घाइते पन्तलाई उपचारका लागि ओम अस्पताल उनका साथिहरुले १५ मिनेटमा नै लगेका थिए । तर अस्पतालले पहिले पैसा जम्मा गर्न भन्यो । अस्पतालले पैसा र आफन्त खोज्दासम्म उनी होसमा नै थिइन् । केही घण्टापछि पैसा जम्मा गरियो र आइसीयुमा राखेर उपचार गर्न थालियो तर त्यो बेलासम्म धेरै ढिला भैसकेको थियो । उनले अन्तिम समयमा आफ्नी आमासँग कुरा गर्छु भनेकी थिइन् ।
उनलाई मोबाइलको पासवर्ड हान्न भनियो तर उनले मिलाउन सकिनन् । अनी त्यसपछि उनकी एकजना साथिले सीम झिकेर आफ्नो मोबाइलमा राखिन् । उनले उनकी माइजुलाई घटनाबारे जानकारी दिइन् । त्यो सब गर्दा समय धेरै बित्यो र पन्त होसमा थिइनन् । यति गर्दा गर्दै पन्तले बिहान ७ बजे तिर अन्तिम सास लिएर यो संसारबाट विदा भईन ।
सोमवार ओम अस्पतालको प्रागंगणमा देखिएको दृष्यले सबैको मन हल्लाउथ्यो । समाचार लेख्ने र पढ्नेहरुका लागि दैनिकी जस्तै बनेको त्यो एउटा घटनाले श्रृष्टिको परिवारका लागि जिवनभरको लागि शुल बनेर गयो । सोमबार दिउँसो ३ बजे ॐ अस्पतालको प्रांगणमा मानिसको भिडभाड थियो । प्रहरीको पनि उपस्थिति बाक्लो थियो । त्यहीँ भीडमा एक महिला डाँको छोडेर रुँदै थिइन् । सुकेधारामा भएको दुर्घटनाले उनको छोरीलाई चुँडेर लगेको थियो । बस चालकले थोरै पनि सावधानी नअपनाएका कारण जिवनको अनगिन्ती सपना संगालेकी २२ वर्षीया श्रृष्टि पन्तले यो संसार छोड्नुपर्यो ।
‘देउताजस्ती छोरी थिई, कसले मार्‍यो ? मेरो छोरी पढ्न आएकी थिई, कसले के गरिदियो ?, कत्ति दुःख गरेर हुर्काएकी छोरी, अघिल्लो साँझ के खाएकी थिई होला ? कठै आमाको मन । छोरीले संसार छोडिसकिन् तर आमालाई हिँजो छोरीले खाएकी थिइ की थिइन भन्ने पिर । , केही खुवाएको थियो कि थिएनौ बाबु ? उनी दिदीसंगै काठमाडौंमा भाडामा बस्दै आएका छोरालाई प्रश्न गरिरहेकी थिइन्। डाँको छोडेर बिलौना गर्दै रोइरहेकी आमाको त्यस्ता प्रश्नको जवाफ छोराले पनि दिन सकेका थिएनन । उनका आफ्नै आँखा रसाइरहेका थिए। आफैं सम्हालिन गाह्रो हुँदाहुँदै पनि उनी आमालाई सम्हाल्ने कोसिस गर्दै थिए।
यदी अस्पतालले तत्काल उपचार सुरु गरेको हुन्थ्यो भने सायद कुरा केही फरक हुन्थ्यो । गत वर्ष मात्रै विवाह गरेकी उनी श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर नेपालमा अध्यन गर्दै आएकी थिइन् । सृष्टिको माइती गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ प्युघरवेशी हो । सोमबारको घ टना सुनेपछि घर–माइतीमा शोक छ । सृष्टिको एक वर्ष अगाडी मात्र उनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी थिइन्। उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ।
सृष्टिका आमाबुवा बिहानै अबुँवाबाट गाडी चढेर काठमाडौं आएका छन् । एक छिमेकीले दिएको जानकारीअनुसार सृष्टि घरकी कान्छी छोरी थिइन् । उनका एक दिदी र भाइ छन् । सृष्टिलाई ठक्कर दिने बसका चालकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । उनी गोरखा घर भइ धुम्बाराही बस्दै आएकी थिइन् ।
दिदीको अकालमै निधन भएको खबरले भाइ र दिदीका आँखा ओभाएका छैनन्। छेउमा रहेका सृष्टिका बाबु टोलाइरहेका थिए। उनी भावशून्य देखिन्थे। ’पछिल्लो पटक दसै‌ र तिहार मानेर काठमाडौं फर्केको थिई,’ उनी कसैलाई भन्दै थिए। आफु कतारको तातो हावामा कष्ट भोगेर पनि आफ्नी श्रीमती श्रृष्टिलाई पढाउने सपना बोकेका रामको सपना पनि उजाडिएको थियो ।